Bhasikiti an empty basket - Mahofa – Nehanda Radio
Last updated Mar 15, 2017 356
The Minister of State for Masvingo Provincial Affairs, Shuvai Mahofa last week attacked Zimbabwe People First (ZimPF) candidate in the upcoming Mwenezi East parliamentary by-election, Kudakwashe Bhasikiti, describing him as an irrelevant empty basket with nothing meaningful to offer.
“Kuno ndinonzwa kuti kuna Bhasikiti, iri ndiro bhasikiti risina kana chinhu zvaro…yangova tswanda yofanzirofa. Look at what happened in Masvingo RDC by-election, ZimPF’s Rosiwetta Madzivire was humiliated and she immediately resigned…that is how Zanu PF operates,” Mahofa said.
“Tauya naye wamakasusukidza….though it is not yet official, but 12 000 votes against 4 000 votes…it is obvious that this one (Chadzamira) is the provincial chairman elect,” said Baloyi to which Chadzamira immediately stood, did a Zanu PF slogan and sat down.
Baloyi was referring to the over 12 000 votes that Chadzamira obtained in the inconclusive Zanu PF provincial chairmanship election against his rival Retired Colonel Mutero Masanganise’s paltry 4 888. Radio VOP
Alois BaloyiEzra ChadzamiraKudakwashe BhasikitiShuvai MahofaZanu PFZimPF
Jul 10, 2020 25,508